मानब तस्करी थलो बन्दै कृष्णनगर , – Ranga Darpan
मानब तस्करी थलो बन्दै कृष्णनगर ,
रंग दर्पण १९ माघ – तौलिहवा : पछिल्लो समय कृष्णनगर सीमाक्षेत्र मानव ओसारपसारको ट्रान्जिट प्वाइन्ट बन्न थालेको छ। एक साताको तथ्यांक अनुसार आधा दर्जन बढी चेलीको उद्धारले कृष्णनगर मानव बेचविखनको ट्रान्जिट प्वाइन्ट बन्न थालेको प्रष्ट हुन्छ। मानव अधिकारको क्षेत्रमा त्यहाँ कार्यरत विभिन्न संघ संस्थाको तथ्यांकले दिनप्रति दिन मानव ओसारपसारको घटनामा वृद्धि हुँदै गएको देखाउँछ।
कृष्णनगर नाका सहज र खुला सीमाका कारण विचौलियाले कयौ बालिका तथा युवतीलाई सोही नाका प्रयोग गरी भारत कटाउने गरेको मानव बेचबिखनविरुद्ध कार्यरत संघसंस्थाको भनाइ छ। कृष्णनगर क्षेत्रमा अहिले मानव बेचविखनविरुद्ध शान्ति पुनस्र्थापना गृह र के.आई. नेपाल दुई संस्था सीमा निगरानी गर्दै आएका छन्। उनीहरुका अनुसार आशंका गरिएका कैयौं बालिका तथा युवतीको उद्धार भएपनि बिचौलियाले आँखा छलेर भारत छिराउने गरेको छ। आँखा छलेर सीमा कटाइएका सयौं नेपाली चेली बेचबिखनको सिकार बन्न पुगेका छन्।
सातामा पाँच बालिका, एक बालकको उद्धार
शान्ति पुनस्र्थापना गृह (पीआरसी) ले एक सातामा कृष्णनगर नाका हुँदै भारत तथा अन्य खाडी मुलुक जान लागेका पाँच बालिका र एक बालकसहित ६ जनाको उद्धार गरेको छ। विचौलियाको प्रलोभनमा परी पढाइ छाडेर बालिका भारततर्फ जान लागेका हुन्। विचौलियाको मायाजालमा परेका पाँच जना बालिका प्यूठानका हुन्। उद्धार गरिएका सबै बालिका १५ वर्षमुनिका रहेको पीआरसी संयोजक भूमिराज भट्टराईले बताए। सातामै चार पटक गरी पाँच बालिकाको उद्धार गरेको भट्टराईको भनाइ छ। एकै जिल्लाबाट लगातार बालबालिका विदेशिनुले प्युठानलाई चेलीबेटी बेचविखनको जोखिमयुक्त जिल्लाको रुपमा हेरिएको छ।
पीआरसीले नेपाल प्रहरीको सहयोगमा माघ दोस्रो सातामा प्यूठानका स्वर्गद्वारी नगरपालिका र सरुमारानी गाउँपालिकाका ती बालिकालाई कपिलवस्तुको कृष्णनगर नाकाबाट उद्धार गरेको हो। उद्धार गरिएका सबै बालिकालाई परिवारको जिम्मा लगाइएको छ।
पीआरसीले प्रहरीको सहयोगमा प्युठान जिल्ला घर भएकी १० वर्षीया बालिकालाई गत माघ १४ गते साँझ कृष्णनगर सीमा नाकाबाट उद्धार गरेको थियो। प्यूठानको सरुमारानी गाउँपालिका घर भएकी ३४ वर्षीय दीपा रावत र २० वर्षीय धनबहादुर राउतले बालिकालाई विवाह गरी उपचारको बहानामा ललाई फकाई भारतको पञ्जावमा लैजान लागेकोमा बालिकाको उद्धार गरिएको थियो।
त्यतिमात्र होइन पीआरसीले बाग्लुङका ११ वर्षीय एक बालकलाईसमेत कृष्णनगर नाकाबाट उद्धार गरी घर फिर्ता गरेको छ। निसिखोला गाउँपालिका ३, बाग्लुङ घर भएका ऋषिराम रेग्मीका ११ वर्षीय छोरा नवराज रेग्मीलाई प्रहरीको सहयोगमा पीआरसीले उद्धार गरेको हो। कक्षा ५ मा अध्यायनरत नवराज जागिर गर्न भनी ५० रुपैयाँ लिएर भारततर्फ जाँदै गर्दा कृष्णनगरबाट उद्धार गरिएको पीआरसी संयोजक भट्टराईले बताए।
मानव अधिकारको क्षेत्रमा कृष्णनगरमा कार्यरत केआई. नेपालले भारतमा अलपत्र परेकी १७ वर्षीय चेलीको उद्धार गरेको छ। गुल्मी रिडी घर भएकी नाम परिवर्तन पूजालाई चण्डीगढ अन्तर्गत मोहाली यरियामा अलपत्र अवस्थामा रहेकी नेपाली चेलीको उद्धार गरेको हो। भारतको मूल प्रवाह अखिल भारत–नेपाल एकता समाज नगर समितिको सहयोगमा उद्धार गरेको केआई नेपाल कपिलवस्तु जिल्ला संयोजक केशर विश्वकर्माले जानकारी दिए।
केही बर्ष अघि दुर्घटनामा परी आमा र दाजुलाई गुमाएकी किशोरी सौतेनी आमाको पीडा सहन नसकी बेचबिखनको सिकार बन्न पुगेकी हुन्। “पहिले पनि भारतको बिहारमा बेच्ने योजना र अहिले पञ्जाबमा बेच्ने योजना बनाएका थिए। तर, म भाग्न सफल भएँ।’ किशोरीको भनाइ उदृत गर्दै केआई संयोजक विश्वकर्माले बताए। किशोरीका अनुसार उनकी एक दिदी पनि केही महिनादेखि सम्पर्कमा छैनन्।
रंग दर्पण बिसेस –
धनराज चुनारा र करिश्मा घर्ति मगर ले नचाय मगर भासमा दर्सकलाई ,,